Iningi Lokusebenza Okubalulekile Lokususa Ama-Developers - Ukubukwa Okufushane Okuvela Ku-Semalt
Ukukhwabanisa kweWebhu kuyasetshenziswa ezindaweni eziningi kulezi zinsuku. Kuyinkambinkimbi eyinkimbinkimbi futhi idinga isikhathi esiningi nemizamo. Noma kunjalo, amathuluzi ahlukene we-web crawler angenza lula futhi aguqule yonke inqubo yokukhwabanisa, okwenza idatha ibe lula ukufinyelela futhi ihlelwe. Ake sihlole uhlu lwamathuluzi wokukhwabanisa we-intanethi anamandla kakhulu futhi awusizo kuze kube manje. Zonke amathuluzi achazwe ngezansi ziwusizo kakhulu kubathuthukisi kanye nabahleli.
I-Scrapinghub iyisitoreji sedatha esisekelwe efwini nethuluzi lokukhwabanisa lewebhu. Isiza kusuka kumakhulu kuya ezinkulungwaneni zabathuthukisi ukulandela ulwazi olubalulekile ngaphandle kokukhishwa. Lolu hlelo lusebenzisa i-Crawlera, okuyi-smart proxy rotator. Isekela ukulinganisa kwe-bot yokunciphisa ibhodlela futhi igweba amawebusayithi avikelwe yi-bot phakathi nemizuzwana. Ngaphezu kwalokho, ikuvumela ukuba uhlele indawo yakho kusuka kumakheli ahlukile e-IP nezindawo ezihlukahlukene ngaphandle kwanoma yisiphi isidingo sokuphathwa kwe-proxy, ngokubonga, leli thuluzi liza nenketho ephelele ye-HTTP API ukuze wenze izinto zenzeke ngokushesha.
Njenge-crawler ye-web based browser, uDexi.io ikuvumela ukukhipha futhi ukhiphe kokubili amasayithi alula futhi athuthukile. Ihlinzeka ngezinketho ezintathu eziyinhloko: Ukwedlula, umgwaqo, namapayipi. I-Dexi.io ingenye yezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu nezamangalisa noma izinhlelo ze-web zokukhahlela abathuthukisi..Ungalondoloza idatha ekhishwe kumshini wakho / ideskki eyinkimbinkimbi noma uyenze ibanjwe kwisiphakeli sikaDexi.io ngamasonto amabili kuya kwamathathu ngaphambi kokuba ifakwe kungobo yomlando.
I-Webhose.io yenza abathuthukisi nabaphathi bewebhu ukuthi bathole idatha yesikhathi sangempela futhi bahlasele cishe zonke izinhlobo zokuqukethwe, kufaka phakathi amavidiyo, izithombe , futhi umbhalo. Ungakwazi ukukhipha amafayela futhi usebenzise imithombo eminingi efana ne-JSON, RSS, ne-XML ukuze uthole amafayela akho alondolozwe ngaphandle kwenkinga. Ngaphezu kwalokho, leli thuluzi lisiza ukufinyelela idatha yomlando kusuka kusigaba sayo se-Archives, okusho ukuthi ngeke ulahlekelwe yizinyanga ezimbalwa ezizayo. Isekela izilimi ezingaphezu kwezingamashumi ayisishiyagalombili.
Abathuthukisi bangakha ama-dataset ezizimele noma bangenise idatha kumakhasi ethize wewebhu ku-CSV usebenzisa i-Import.io. Ngenye yezintambo ezihamba phambili zewebhu noma ezisebenzisekayo noma amathuluzi wokukhipha idatha. Ingakwazi ukukhipha amakhasi angu-100 + ngemizuzwana futhi iyaziwa nge-API yayo eguquguqukayo futhi enamandla, engakwazi ukulawula i-Import.io ngokuhlelekile futhi ikuvumele ukuthi ufinyelele idatha ehleliwe kahle. Ukuze uthole okuhlangenwe nakho komsebenzisi okungcono, lolu hlelo lunikeza izinhlelo zokusebenza zamahhala ze-Mac OS X, i-Linux ne-Windows futhi ikuvumela ukulanda idatha kokubili kumathekisthi nezithombe.
Uma ungumthuthukisi onobuchwepheshe futhi ubheka ngenkuthalo uhlelo lokusebenza olunamandla lokukhahlela iwebhu, kuzomele uzame ama-80legs. Ithuluzi eliwusizo elithatha amanani amaningi yedatha futhi linikeza ngezinsimbi zokusebenza zokukhwabanisa zewebhu ezisezingeni eliphezulu ngesikhathi esithile. Ngaphezu kwalokho, ama-80legs asebenza ngokushesha futhi angakhansela amasayithi amaningi noma amabhulogi ngemizuzwana nje. Lokhu kuzokuvumela ukuthi ulandele idatha yonke noma ekhethiwe yamasayithi wezindaba nabezenhlalo, ukudla kwe-RSS ne-Atom, kanye namabhulogi wokuhamba ngasese. Kungalondoloza futhi idatha yakho ehleliwe kahle futhi ehleliwe kumafayela e-JSON noma i-Google Amadokhumenti Source .